डोल्पाकै पहिलो महिला डाक्टर बन्दाको अनुभव, डा. मेलिना हमाल । - Tripura Sanchar
डोल्पाकै पहिलो महिला डाक्टर बन्दाको अनुभव, डा. मेलिना हमाल ।
मेलिना हमालको बाल्यकाल…..
दुर्गम हिमाली जिल्ला डोल्पाकै पहिलो महिला डाक्टर बन्न सफल मेलिना हमालको जन्म २०५० सालमा भएको हो । बुवा हेमराज हमाल र आमा कमला हमालकी जेठी सुपुत्री मेलिना पढाईमा बाल्यकालदेखि नै अब्बल हुनुहुन्थ्यो । बुवा हेमराजलाई उत्कृष्ट गुरु मान्ने हमालले बुवानै पाधनाध्यापक रहेकाे स्थानीय श्री त्रिपुरा निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट गर्नुभएको थियो । राम्राे पारिवारीक वातावरणका कारण हमालकाे बाल्यकाल देखि नै मिहनेत र लगनशिताले निरन्तरता पायाे ।
श्री जनप्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षामा विद्यालयकै उत्कृष्ट बन्न सफल हमालले उच्च शिक्षा भने ललितपुरको क्यास्पियन भ्याली कलेजबाट गर्नुभएको हो ।
कक्षा १२ उतिर्णपछि हमालले पाटन एकेडेमी एण्ड हेल्थ साइन्सको एमबीबीएस छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । यसरी उहाले डाक्टर बन्ने यात्राको शुरुवात गर्नुभयो । ६ वर्ष एमबीबीएस पढाई सफलतापूर्वक पुरा गरि हमाल हाल आफ्नै जिल्ला डोल्पाको जिल्ला अस्पतालमा डाक्टरको रुपमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
जीवनका अनेकौँ अरोहअवरोहलाई पार गरेर सबैको प्रेणा बन्न सफल डाक्टर मेलिना हमालसँग त्रिपुरा सञ्चारका कार्यकारी सम्पादक रुपक कुलालले गर्नुभएको कुराकानी ।
६ वर्षे डाक्टरी पढालाई यसरी सम्झनु हुन्छ डा.मेलिना जी ?
पढाइको समय अवधि लामो थियो । बेलाबेला पढाइमा कठिनाइहरु पनि आउँथे । तर अहिले सम्झदा ती दिन र पलहरु रमाइला लाग्छन् । साथीभाइसँग हास्दै, खेल्दै हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्दै वित्यो । तर, बेलाबेला आफु राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक बन्दै गरेकाे भान पनि हुन्थ्याे ।
मान्छेको जिमनमा सुख र दुख आइनै रहन्छ तपाइको जीवनको सबैभन्दा खुशी र दुखक्षण कुन हो ?
मेरो जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षण सम्झनु पर्दा एमबीबीएसको रिजल्ट आएपछि ममीबुवालाई सुनाउँदा निकै खुशी भएकी थिए । त्यो पल म कहिल्यै भुल्दिन त्यो पल निकै अविष्मरणनीय छ ।
जीवनकै दुखद पल सुनाउँदा डा.हमाल निकै भावुक हुनुभयो ।
मानिसको जीन्दगीमा सानो तिनो दुख पीडा त भई नै हाल्छ तर, दुखद क्षण भन्ने वित्तिकै मलाइ यति धेरै वर्ष मैले दुख र मेहेनत गरेर ममीबुवाको सपना पुरा गरे । पढाइ सकी घर फर्कनेबेलामा अकल्पनीय रुपमा मैले मेरो प्रेणाको सबैभन्दा ठुलो श्रोत मेरो बुवालाई गुमाए । मेरो जीवनको हरेक सफलता अनि मैले गर्ने हरेक राम्रो कामको श्रेय म बुवालाइ नै दिन्छु । म प्रार्थना गर्छु कि हरेक जन्म म उहाँकै सन्तान भएर जन्मुँ ।
तपाइको आगामी लक्ष्य र योजनाहरु केके छन् ?
अहिलेलाई म जिल्ला अस्पताल डोल्पामा २ वर्षको लागि नियुक्त भएर आएकी छु । यो अवधिमा मैले जानेको ज्ञान र सीपको भरपुर उपयोगगरी धेरै भन्दा धेरै जिल्लाबासीलाइ सेवा गर्ने कोशिस गर्नेछु । डोल्पामा रहुन्जेल यहाँका जनताको सेवा समर्पित हुन्छु ।
दुर्गम जिल्लामा जन्मेर डाक्टर बन्न कत्तिको गाह्रो महसुश गर्नुभयो ?
केही गाह्रो त पक्कै भयो । एमबीबीएस पढ्नलाई एलेभल वा प्लस टु साइन्समा बायोलोजी बढेको हुनुपर्छ । यी विषय बढ्न जिल्लामा कलेज छैनन् कि नेपालगञ्ज र काठमाडौँ जानपर्ने । नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश गाह्रो नै भन्नुपर्छ ।
तपाइजस्ता थुप्रै दुर्गम जिल्लामा डाक्टर बन्ने सपना बोकेका कलिला मुना छन् उनीहरुलाइ तपाइको सुझाब के छ ?
दुर्गम भन्दैमा सबैकुरा गाह्रो मात्रै भन्ने हुँदैन । सरकारले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीका लागि भनेर छात्रवृत्ति कोटाको पनि ब्यवस्था गरेको छ । परिवारको राम्रोसाथ, पढाइ र परिश्रम निरन्तर गर्ने हो भने सफल बन्न सकिन्छ । दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीहरु डाक्टर, इन्जिनियरहरु बन्न सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । सानैदेखि उदेश्य ठुलो हुनुपर्छ, परिश्रम पनि सोहीअनुसार गरेर निरन्तरता दिनु सफल बन्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु ।
Previous articleप्रधानमन्त्रीले भने– सरोकारै नभएको वाइडबडीमा जोडेर अधिकारीलाई बदनाम गर्न खोजियो
Next articleपूर्वमन्त्री अधिकारीको अन्त्येष्टि, तीन छोरीले दिए दागबत्ति